China HRC60 Carbide 4 Flute Roughing End Mill mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
Fitaovana mivaingana: Ampiasao ny ZK40SF miaraka amin'ny atiny 12% Co sy ny haben'ny voam-bary 0.6um
Coating: AlTiSiN, miaraka amin'ny hamafiny sy ny marin-toerana maharitra hatramin'ny 4000HV sy 1200 ℃,
Halava manapaka Lc
Halava ankapobeny L
Miaraka amin'ny toe-tsaina mampientanentana ny "fahombiazana avo lenta, fanamorana, fahamendrehana ary fanavaozana", ary mifanaraka amin'ny torolàlana ho an'ny "kalitao tsara fa ny vidiny tsara kokoa", ary ny "crédit global", dia miezaka izahay hiara-hiasa amin'ireo orinasan-tsolosaina fiara manerana ny faritra izao tontolo izao hanao fiaraha-miasa mandresy.
Ny orinasa dia manana rafitra fitantanana tonga lafatra sy rafitra serivisy aorian'ny fivarotana. Manokana ny tenanay amin'ny fananganana mpisava lalana amin'ny sehatry ny sivana izahay. Ny orinasanay dia vonona ny hiara-hiasa amin'ireo mpanjifa isan-karazany sy any ivelany mba hahazoana ho avy tsaratsara kokoa sy tsara kokoa.
Noho ny fahamarinan-toerana ny vokatra, famatsiana ara-potoana ary ny serivisy tso-po dia afaka mivarotra ny vokatra tsy amin'ny tsena anatiny ihany, fa koa nanondrana any amin'ny firenena sy ny faritra, anisan'izany ny Afovoany Atsinanana, Azia, Eoropa ary firenena sy faritra hafa . Mandritra izany fotoana izany dia mandray baiko OEM sy ODM ihany koa izahay. Hanao izay tratry ny herinay izahay hanompoana ny orinasanao, ary hametraka fiaraha-miasa mahomby sy sariaka miaraka aminao.
Miorina amin'ny vokatra misy kalitao avo lenta, vidin'ny fifaninanana, ary serivisinay isan-karazany, nanangona tanjaka sy traikefa matihanina izahay ary nanangana laza tsara eo an-tsaha. Miaraka amin'ny fampandrosoana tsy tapaka, manolo-tena tsy ny orinasan-trano sinoa fotsiny izahay fa koa ny tsena iraisam-pirenena. Enga anie ianao hifindra amin'ny vokatra avo lenta sy ny serivisy mafana. Andao hanokatra toko vaovao ho an'ny tombontsoa sy ny fandresena roa.
Ny foto-kevitray dia "fahamendrehana voalohany, kalitao tsara indrindra". Matoky izahay amin'ny fanomezana anao serivisy tsara sy vokatra tsara. Manantena mafy izahay fa afaka manangana fiaraha-miasa mandresy fandresena miaraka aminareo amin'ny ho avy!
Teo aloha: 60 HRC Square End mill-4 Flute
Manaraka: HRC45 Carbide 4 Fantsom-pandrefesana lava lava lava
Ball fanosotra orona baolina
60 HRC Carbide 4 Flute fenitra halavany zoro R ...